Ngathi | Linqing Meifule Precision Ukunikela Co., Ltd.
Linqing Meifule Precision Ukunikela Co., Ltd.
Guantao ikratshi elivelisa imveliso., Ltd.
(I-LINQING MEIFULE PRECISION BEaring CO., LTD) isekwe ngo-2005, kwaye ivelise ngokukodwa iibheringi zebhola ezinzulu, ibhloko yomqamelo kunye neebheringi ze-taper. Kananjalo ungenza iibheringi ezizodwa ngokomzobo womthengi okanye isampulu. Umzi-mveliso ngoku ubekwe kwindawo enamashishini. Indawo yonke yemizi-mveliso igubungela i-80000 yeemitha zesikwere kwaye ungumnini wokuveliswa kokutya okupheleleyo, okunokonga iindleko zokuvelisa kunye noncedo kwizenzo ezifanelekileyo.
Umzi-mveliso uqalisa ukuthumela ngaphandle ngokuthe ngqo ukusuka ngo-2015 kwaye wakha inkampani ethumela kwelinye ilizwe (XIAMEN PRIDE BEARINGS CO., LTD) yokwenza eyona nkonzo intengiso. Iqela lokuthengisa linabasebenzi abanamava kunye nemithetho emnandi yezoqoqosho kwisixeko saseXiamen. Kwaye emva koko wenze ikhonkco elifanelekileyo kwimveliso, kwintengiso nasemva kwentengiso.
Ngokusekwe kubuchwephesha bemveliso kunye namava okwenza iibheringi zebhola emseleni, umzi-mveliso uqala ukuvelisa ibhloko yomqamelo ngo-2010. ukuthunyelwa. Emva koko qiniseka ukuba uyanelisa ukubaleka komsebenzisi. Kwaye wonke umntu othengisayo kufuneka abe nolwazi lobungcali kwiibheringi nakwintsimi yoomatshini, emva koko unokunika ingcebiso elungileyo kumthengi kunye nexabiso eliphantsi kakhulu.
Iimveliso zethu ikakhulu njengoko zingezantsi
Siwaxabisile onke amava kunye nokuqhubela phambili kuhlala kuyiminyaka kwaye ngoku siba nobuchwephesha ngakumbi kumgca wokuthwala.
1. Unit iibheringi UC, UK, SA, SB, kuba 200 nama-300 series
2. Yila izindlu zentsimbi P, F, FL, T, FA, FB, FC, HA njalo njalo
3. Ibhola ye-groove ethweleyo (ubukhulu obuncinci kunye nobukhulu obuphakathi) nge-intshi okanye metric
4.I-Taper roller ethwele nge-intshi kunye nochungechunge lweetriki (umgangatho ongaphezulu kwe-P0-P6 kwibakala)
Ngokusekeke kwintembeko kunye nokugcina ingqibelelo, ukugcina umgangatho kuqala ngumgaqo-nkqubo wethu weshishini.
Siza kugcina kwaye sandise imarike yethu ngomgangatho ophezulu, ixabiso kunye nenkonzo. Singathanda ukuya phambili ngakumbi kwaye sikhula ngakumbi kwicandelo lokuthwala.
Ngokunyanisekileyo samkela bonke abathengi abaxabisekileyo bagcine intsebenziswano ethembekileyo nathi.